Nin Muslim Ah Oo Loo Xidhay In Uu Haweenay Labaad Guursaday Isaga Oo Aan Afadiisii Hore Ka Haysan Wax Ogolaansho Ah!! - Wargane News
Home Entertainment & Lifestyle Nin Muslim Ah Oo Loo Xidhay In Uu Haweenay Labaad Guursaday Isaga...
Maxkamad ku taalla dalka Pakistan ayaa nin ku xukuntay lix bilood oo xadhig ah maadaama uu xaas labaad guursaday isaga oo aan ogolaansho ka haysan afadiisii hore. Tani waxa ay nooqtay arrin aad loola yaabay oo markii labaad dalkaasi ka dhacaya. Maxkamadda oo ku taal magaalada Lahore ayaa ninkaa ka diiday dooddii uu isku difaacayay ee ahayd in diintiisu u ogoshahay in uu min yaraysto maadaama uu Muslim yahay.
Xaaska Saqib, Cayesha Bibi ayaa doodda ku guulaysatay, waxayna isku difaacday in guursiga labaad, iyadoon fasax qoraal ah laga helin, uu yahay mid xadgudub ku ah sharciga qoyska ee dalka Pakistan.
Garsoorihii maxkamadda ayaa waxa kale oo uu ninkaa ku xukumay in uu bixiyo ganaax lacageed oo dhan laba kun oo doollar.
Dadka u dooda xuquuqda dumarka ayaa sheegay in go’aanka maxkamaddani uu niyad jebinayo ragga doonaya in ay xaasas badan guursadaan. Halka sidoo kale dad badan oo kale arrinkan aad uga hor yimaaddeen oo u diideen iyaga oo u arka mid shareecada islaamka ka hor imanaya.
Sidoo kale kooxaha xuquuqal insaanka iyo haweenka gaar ahaan u dooda ayaa waxay sheegeen in ay xoojinayso awoodda dumarka, ayna sababi doonto in haween badan ay tagaan maxkamadaha.
“Waa mid dhiirri-gelin leh in xaas lagu xadgudbay ay kiiskan maxkamadda keentay,” ayey tidhi Romana Bashir, oo madax ka ah mashruuc nabadda iyo horumarka ka shaqeeya. “Go’aankani wuxuu awood siinayaa dumarka,” ayey hadalkeeda ku dartay.
Dalka Pakistan oo ka mid ah dalalka ugu badan dunida Muslimka, raggu way guursan karaan xaasas kale, balse waa in ay fasax ka helaan xaaska koobaad ka hor guurka midda labaad.
Golaha arrimaha Islaamka ee Pakistan, oo aalaaba dowladda kala taliya arrimaha diinta ayaa dhalleeceeya sharciga qoyska ee sidan dhigaya. Sikastaba, soo jeedintooda sharci ahaan, meesha lagama saarin. Saqib ayaana xaq u leh in uu racfaan ka qaato go’aanka maxkamaddu gaadhay oo dad badan ka cadhaysiiyey halka kuwo badani ku farxeen haba u badnaadaan haweene.